Saami-unug – Sidaan baa loo sameeyaa - Public_Cellprov
Länkstig, du är på sidan Saami-unug – Sidaan baa loo sameeyaa
Waxaa laguu yeeri doonaa laga bilaabo sannadka aad 23 sano buuxisid
Laga soo bilaabo marka aad 23 sano gaartid waxaa lagugu* yeeri doonaa saami-unug oo haweenka laga qaado saddexdii sano mar. Da´da 50-meeyo kaddib waxaa laguu yeeri doonaa shantiii sanaba mar ama todobadii sanaba mar. Wixii ka danbeeya da´da 64 sano waxaa loo yeerayaa adiga horay isbedallo u qabay.
In la qaado saami-unug qofku ikhtiyaar buu u leeyahay, laakiin waa saami (tijaabo) muhiim ah difaaca ugu fiicanna waxaad helaysaa markii aad tagtid mar kasta oo laguu yeero.
Warqadda ballanta guriga lagugu soo dirayo waxaa ku qoran wakhtiga iyo magaca iyo cinwaanka xarunta qaabilaadda caafimaad ee saamiga unugga lagaga qaadayo. Ma rabtaa ballanta inaad adigu qabsatid ama dooratid xarun qaabilaad caafimaad kale waxaad si fudud uga samaysan kartaa halkaan:
Iska beddal ballanta qaadida saami-unug.
Ma rabtaa inaad sii ogaatid wax intaa dheer oo ku saabsan u fududaynta dadka lixaadkoodu dhimman yahay inay soo galaan xarumaha qaabilaadaha caafimaad waxaad ka heli kartaa Tillgänglighetsdatabasen.
*)Dadka lambarkooda shaqsigaa (tobanka lambar) lambarka ugu danbeeya kan ka horreeya tiro siman yahay (tiro dhaban ah) baa loo yeerayaa.
Goormaa lagaa qaaday saami-unug markii u danbaysay?
Haddii aadan hubin markii u danbaysay ee aad u tagtay qaadida saami-unug ama ballantu ay ku dhaaftay waxaad la xiriiri kartaa waaxda ballamaha u qaabilsan maamulka gobolka. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa markii u danbaysay oo saamiga unugga ay ummuliso ama dhakhtar cudurrada haweenka kaa qaaday.
Saamiga unug wuxuu muhiim u yahay dhammaan dadka leh dhuun ilmoside
Haddii aad leedahay dhuun ilmoside waxaa muhiim ah inaad si joogto ah iskaga qaadid saami-unug ee haweenka laga qaado. Ayadoo aan loo fiirinayn Jinsiga aad isku aragtid iyo cidda aad la galmootid.
Haddii aad wax ka beddal ku samaysay jinsiga aad sharciyan ka tirsan tahay oo aad ilmoside leedahay si iskeed ah lagugu yeeri mayo ee waa inaad la xiriirtid xarun qaabilsan cudurrada haweenka si loo qaado saami-unug.
Senast uppdaterad: 2019-04-23 15:25